Mayelana Nathi-Yongli Industries
● Yenza I-Globe Trade Ibe Lula
Lwela ukuzuzisa amakhasimende
Mayelana nokuthi ikhasimende likhathazeke ngani
● Sebenza Kanzima,Dlala Kanzima ● Ikhwalithi Yiyo Okukhathaza Kakhulu ● Ukubambisana Kweqembu ● Jabulela Ushintsho
I-Yongli Industries ikhiqiza i-OEM&ODM silicone plastic houseware yekhwalithi ephezulu, i-kitchenware kanye nemikhiqizo yokupakisha.ngokulandela yonke imithetho ejwayelekile yamazwe ngamazwe futhi unesitifiketi ku-ISO 9001, BSCI & Disney FAMA kusukela ngo-2010.
Yonke imikhiqizo ithunyelwa eYurophu, eMelika, eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, emazweni nasezifundeni ezingaphezu kuka-60.
Yonke imikhiqizo yethu ihlangana futhi yeqe imikhuba evumelana nemvelo.Ngokuphatha okunembayo, okokusebenza okuthuthukilekanye nethimba le-R & D elinekhono, yonke imikhiqizo yethu ingeyekhwalithi ephezulu kakhulu ehlangabezana nezindinganiso zaseYurophu zokuthekelisa.
Isizinda sethu esiqinile sivumela amaklayenti ethu ukuthi abone isampula yomklamo wawo ngaphambi kokuqala ukukhiqizwa kwevolumu.Inkampani yethu iqhubeka nokwandisa umugqa womkhiqizo wethu ngakho xhumana nathi nge-imeyili ukuze ukhulume nganoma iyiphi idizayini ye-OEM.
Sidinga ikhwalithi enhle, izintengo ezincintisanayo, ukulethwa okusheshayo, nokunaka ngemva kwesevisi yokuthengisa, samukela amakhasimende avela emhlabeni wonke.Zama isampula ye-oda namuhla.Qiniseka ukuthi uxhume umphakeli onokwethenjelwa nonekhono.
Ngaphandle kwalokho, sinikezela ngezinsizakalo zokuhlola nokuthunyelwa kwamakhasimende ahloliwe futhi athembekile.Sihlinzekaumbiko onemininingwane enempendulo yomhloli yokwaneliseka kwamakhasimende.
Mayelana nesevisi yokuthumela , sinikezela ngama-Ex-work, FOB, kanye ne-DDP Incoterms ngokukuxhumanisa nabathumeli bethu bempahla abathembekile.Siqinisekisa ukuthunyelwa okufanele kwemibhalo yokuthekelisa/yokungenisa kubathumeli bempahla okuholela ekulethweni kahleyokusungula endaweni oya kuyo ngaphandle kokuhlupheka.
Wonke ama-oda e-OEM amukelekile kakhulu. Wamukele ngokufudumele wonke amakhasimende amasha namadala ukuze enze imibuzo futhi asivakashele.
Isibopho senhlalo nokuziphatha sisekela konke esikwenzayo.
Sikholelwa ukuthi ukwenza imikhiqizo yekhwalithi enhle akumele kudle abanye.
Siyakukhathalela ngempela ukuthi imikhiqizo yethu ivela kuphi futhi ikhiqizwa ngaphansi kwaziphi izimo.
Umqondisi Wezokumaketha Nokuthengisa
T1 - Umphathi Wephrojekthi
T2 -Umphathi Wephrojekthi